सिन्धुली अस्पतालको ओपिडी सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द
Wednesday, 12 Jun, 2019 11:24 AM
२९ जेठ, काठमाडौं । सिन्धुली अस्पतालको ओपिडी सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ । सोमबार राति ड्युटीमा रहेका डाक्टरमाथि बिरामीका आफन्तले हातपात गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले सेवा बन्द गरेका हुन् । सुरक्षाको अनुभूति नभएसम्म ओपिडी सेवा बन्द रहने अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी जनाएका छन् ।
सोमबार राति अस्पताल ल्याइएकी कमलामाई नगरपालिका– १० की २० वर्षीया अनिशा कार्कीका श्रीमान् कृष्ण बस्नेतले डाक्टर प्रकृति मिश्र, डा.ममता यादव र डा. दिवस ढकाललाई गालीगलौज गर्नुका साथै हातपात गरेका स्वास्थ्यकर्मीको आरोप छ ।
कार्कीलाई मानसिक समस्या देखिएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले मानसिक डाक्टरकहाँ रिफर गरेपछि बस्नेतले विवाद गरेका हुन् । ओपिडी सेवा बन्द भए पनि तीनजना डाक्टरले अस्पताल बाहिर आकस्मिक सेवा भने दिइरहेका छन् । चार महिनाकी गर्भवती कार्की बर्बराउने, चिच्याउने गरेपछि उपचारका लागि आफन्तले अस्पताल पुर्याएका थिए । बिरामीलाई छिटो सुविधासम्पन्नअस्पतालमा लान अनुरोध गर्दा बस्नेतले आफूहरूमाथि हातपात गरेको डा. दिवस ढकालले बताए ।
सिन्धुलीका प्रहरी प्रमुख एसपी चक्रबहादुर सिंहले घटनाको पुष्टि गरेका छन् । उनले डाक्टरलाई बिरामीका आफन्तले गाली गलौज गरेको र सामान्य हातपातको प्रयास भएको बताए । बिरामीको अवस्था गम्भीर भएकाले बस्नेतलाई पक्राउ भने नगरिएको सिंहको भनाइ छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रह्लादकुमार पोखरेलले दोषीलाई कारबाहीका लागि स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरिसकिएको जानकारी दिए ।